Niova aloha ny lokon-drindrina; tsy nisy intsony ny fifamezivezen’ireo fiara raitra sy olona mianjaika mpivory tao.Avy eo nofefena fanitso, toa misy fanamborana izany ary tazana mibaribary eo ny dokam-barotry ny antokom-pivavahana iray.Tena maty tanteraka ve izany ny antoko HVM ka namidy hatramin’ny foiben-toerana ?
Velon-taraina ireo mponina manamorona ny Ekar Ambavahadimitafo noho ny fisian’ny lalankely misy tohatohabato izay tsy azo hizorana intsony kanefa dia misy hantsana ao ambaniny. Efa maro ireo nitondra takaitra vokatry ny fianjerana naterany ka dia miantso ny tompon’andraikitra hamaha ny olana ireo mponina.
Mahasorena ireo mponina eny Antsahavola ny fahafahatesan’ny tohatohabato iray mampitohy an’Antsahavola ho eo Antaninarenina. Manamorona hotely sy toeram-pisakafoanana malaza ho mahasarika anefa ny toerana.
13 mey 1972 – 13 mey 2019, izany hoe, feno 47 taona anio ny nisian’ny tolon’ireo mpianatry ny oniversite nitakiana ny fampitoviana ny fampianarana sy fampiasana ny Malagasy sy vahiny. Hisy moa ny fanamarihana izany etsy Ambohijatovo anio.